IINGCAMANGO EZINGAMA-81 ZESIQITHI SEKHITSHI YESIQHELO (UYILO OLUHLE) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iingcamango ezingama-81 zeSiqithi seKhitshi yesiqhelo (Uyilo oluhle)
Iingcamango ezingama-81 zeSiqithi seKhitshi yesiqhelo (Uyilo oluhle)
Isiqithi sekhitshi ngumzekelo omhle wento yekhitshi enokudibanisa zombini ifom kunye nomsebenzi. Isiqithi sekhitshi sisibali esingadityaniswanga, esihlala simi embindini wekhitshi esivumela ukufikelela kuwo omane amacala. Iziqithi zasekhitshini zinokusebenza njengeziko lokupheka kunye nokulungiselela ukutya, kunye nendawo yokutya-ekutyeni. Eli phepha libonisa igalari yethu yeengcinga zekhitshi kwisiqithi sokuphefumlela.
Uhlobo oluqhelekileyo lobume besiqithi sasekhitshini luxande kodwa awunyanzelekanga ukuba unamathele kuloo nto kwaye unokuba nakho ukumila okanye uhlobo olulungele indawo yakho yekhitshi okanye isitayile. Ezijikeleziweyo, ezimile okwe-L kunye neziqithi ezimilise T ziindlela ezizezinye eziqhelekileyo zoxande. Unokuthathela ingqalelo iziqithi ezizimeleyo, ezisisiseko setafile okanye iinqwelo. Olu khetho lulungile kwiikhitshi ezincinci njengoko zigcina izinto zingaziva zixinekile.
Ungalitshintsha njani igama lakho lokugqibela kwiflorida
Uyilo lweSiqithi seKhitshi
Iindleko zeSiqithi seKhitshi yesiqhelo
Iikhabhathi zesiQithi seKhitshi
Izicwangciso zeSiqithi seKhitshi
Isiqithi seKhitshi nesihlalo
Iziqithi ezinkulu zeKhitshi
Iziqithi ezincinci zekhitshi
Iziqithi zeKhitshi eNcinci
Iziqithi zeKhitshi zale mihla
Iziqithi zeRustic Kitchen
Iibhlokhi zeBlock Kitchen
Ngelixa umsebenzi osisiseko wesiqithi sekhitshi kukubonelela ngendawo yomsebenzi owandisiweyo ngokwandisa indawo yokubeka ikhitshi ekhitshini lakho, kuxhomekeke kwezinye izinto ezikhoyo kukho uhlobo olulungele iimfuno zomntu wonke. Iindidi ezininzi zidibanisa imiphezulu yeetafile kunye nekhabhathi ezantsi. Isiseko sinokuba needrowa, iishelufa ezivulekileyo, iishelufa zeencwadi kunye neekhabhathi zokubonelela ngendawo yokugcina eyongezelelweyo kwaye sisebenza njengendawo yokubonisa. Ezinye iintlobo zisebenza njengeendawo ezithile zomsebenzi okanye amanqaku kunxantathu womsebenzi wasekhitshini. Ezi ntlobo zinokubandakanya iinkcukacha zekhitshi ezifanelekileyo ezinje ngeesinki zesekondari, izixhobo zokwenza izixhobo okanye izitovu zokupheka ukuze zikuncede wenze olona lukhulu kwindawo yakho.
Uyilo lweziqithi zasekhitshini ezipheka isentric zibandakanya indawo yokupheka okanye uluhlu lwesiqithi. Olu hlobo lunokugxila ekulungiseleleni ukutya kwaye lube nendawo enkulu engenakuphazanyiswa. Ezinye iintlobo zinokubandakanya isinki okanye isixhobo sokuhlamba iimpahla ukunceda ukucoca emva kwesidlo. Isiqithi sibekwe embindini wegumbi ukuze sisebenze njengendawo yokulungiselela ukupheka, kodwa sinokusebenza njengeziko lokuzonwabisa kunye noluntu. Isiqithi singathatha indawo yetafile yasekhitshini kwaye sinokubekwa kwindawo yokuhlala ukuyivumela ukuba isebenze njengendawo yokutyela engekho sikweni kunye nehabhu yomsebenzi.
Isiqithi esikhulu sinokuba nendawo ezimbini okanye indawo, indawo yomsebenzi kunye nenye njengendawo yokonwabisa. Indawo yokusebenza kufuneka ibonelele ngendawo eyoneleyo ukuze ngaphezu komntu omnye angene kwaye ancedise ekulungiseleleni ukutya. Ngeli xesha indawo yokonwabisa kufuneka ibonelele ngendawo yokuhlala ebutofotofo yokuba abantu bathethe kwaye baxhomeke ngaphakathi kwaye banxibelelane nabapheki nasemva kokuba isidlo silungile, indawo yokonwabela ukuyitya.
Nokuba yeyiphi na imilo okanye isimbo osikhethayo kwisiqithi sakho sasekhitshini qiniseka ukuba uthathela ingqalelo ubungakanani begumbi eliza kulithatha. Khumbula kuya kufuneka ukwazi ukuhamba ujikeleze isiqithi kwaye ukusuka apho ube nokufikelela ngokulula kwikhitshi lonke. Ubungakanani, ubume kunye nokubekwa kwesiqithi sekhitshi akufuneki kuthintele ukuhamba kwetrafikhi yasekhitshini.
Lo mfanekiso ungasentla ubonakalisa ikhitshi langoku kunye nokuphefumlelwa okudala okusebenzisa isikimu sombala ongathathi hlangothi. Inee khabhathi ezimhlophe zasekhitshini ezinamacwecwe alula kunye netyuwa engwevu yentsimbi kunye nephepha legranite. Ikwanesiqithi esikhulu esinexande lasekhitshini embindini, esiphelweni esimnyama esingwevu kwaye sine-slab esityebileyo seCalacatta marble. Isiqithi sekhitshi sinendawo apho unokubeka khona izitulo ezintathu zebar ngaphakathi, ukuba awunanjongo zokuzisebenzisa okwangoku. Indawo ikhanya kakuhle ngeefestile ezahlukeneyo kunye nezibane ezijingayo ngaphezulu kwesiqithi.
Iziqithi zasekhitshini zesiko ziyindlela elungileyo yokwandisa ukusebenza kwekhitshi kunye nokugcinwa kweemfuno zakho ngelixa unceda ukufezekisa isitayile esifanelekileyo osifunayo. Uyilo lwekhitshi kumfanekiso ongentla lubonisa ulungelelwaniso olulungelelanisiweyo lweetoni ezingwevu ezifudumeleyo nezipholileyo. Ngelixa iindonga zigqityiwe ngetoni efudumeleyo engwevu / emdaka, iikhabhathi ziyazigcina zimhlophe ngokungathathi hlangothi kunye nomphezulu oshushu ongaphezulu ophezu komhlaba ohambelana neendonga. Kugxunyekwe ngaphantsi kwekhawuntara yesiqithi, uya kuqaphela izitulo ezintathu zebar kunye nezinto ezipholileyo ezingwevu, ukunceda ukulinganisa iitoni ezishushu zekhitshi.
Enye yeendlela ezilula zokufumana isiqithi sekhitshi yesiko kuhlahlo-lwabiwo mali kukuyila ngezinto ozisebenzisayo kwi-countertop. Imiphezulu yeetafile zeGranite lukhetho oluhle, oluhlala luhleli kunye noludala kodwa emva koko lunokuba lixabiso elincinci. NgokweNgxelo zabaThengi, ixabiso legranite lisusela kwi- $ 20-60 ngonyawo wesikwere. IMarble ikwayenye into ethandwayo kwaye umphezulu wayo ocwebezelayo uhlala unxulunyaniswa neekhikhini zodidi- ngelishwa, ikwanalo nexabiso lokudibanisa ukutshatisa, kuhlala ku- $ 25-100 ngonyawo wesikwere.
Ukuba ufuna ukubukeka kweklasikhi kunye neklasi yegranite, i-marble, kunye nezinye izixhobo zokubala zamatye zendalo kodwa abaqinisekanga malunga nokukhupha loo mali, enye indlela efanelekileyo iya kuba kukubeka kwi-quartz countertops. I-Quartz, ngenye indlela eyaziwa ngokuba lilitye lobunjineli, yenziwa ngokudibanisa iitshipsi zamatye, ii-resins kunye nee-pigment. Unokufumana ii-countertops ze-quartz malunga ne- $ 20-60 ngeenyawo zenyawo. Ezi zitafile zomeleleyo zihlala zinemibala eyahlukeneyo kwaye zinokulinganisa ngokuqinisekileyo ilitye lendalo.
Esinye sezona zinto zisebenzisekayo kuhlahlo-lwabiwo mali onokuzisebenzisa ukufumana i-countertop eyenziwe ngokwesiko oyifunayo. Ukufumana i-countertop ye-laminate, kuya kufuneka uqokelele ngaphandle kwe- $ 5-25 ngeenyawo zenyawo. Kulula ukuyila nge-laminate njengoko le nto ifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala kunye neepateni. Unokufumana ezinye ezifana nezinto ezibiza kakhulu njengegranite okanye i-marble.
Mhlawumbi eyona nto ibaluleke kakhulu kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nezinto onokuzenza ngokulula ezinokubakho kwiithayile. Ukusebenzisa iithayile kwi-countertop yakho, kuya kufuneka wenze uhlahlo-lwabiwo mali malunga ne- $ 5 ukuya kwi-15 ngonyawo wesikwere. Iithayile ze-Countertop zinokuba yikheramic, i-porcelain, okanye ilitye kwaye zomelele kwaye kulula ukuzicoca nokuzigcina. Zintle kwaye ziyafumaneka kwimibala eyahlukeneyo, ubukhulu, kunye neepateni-ezinokuzenzekelayo.
Iithayile zikuvumela ukuba ufumane ubuchule bokwenene kunye nokudala inkangeleko ekhethekileyo kwi-countertop yakho. Ungadlala ujikeleze kunye neentlobo zethayile ozisebenzisayo, ukudibanisa imibala eyahlukeneyo kunye nokudibanisa iipateni ezahlukeneyo ukwenza uyilo olulungele izinto ozithandayo. Unokwenza i-mosaic ukuqinisekisa ukuba unayo i-countertop ekhethekileyo, ekhethekileyo.
Izinto ezenziwe ngomthi okanye ezenziwe ngomthi zokucheba iibhloko zokubaleka nazo zikwitshiphu kwi - 30 yeedola. Ezi countertops zomthi zisebenza kakuhle kakhulu ukuba ujonge ilizwe okanye ikhitshi ekhangeleka nge-rustic. Bancedisa ukongeza ukufudumala kwasekhaya kwikhitshi elibandayo.
Le khitshi inesiqithi esihle semithi yemithi esisiqithi esine-navy eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nekhabhathi yebronze ekhanyayo ekhanyayo.
Le kota yekota yesiqithi sokudibanisa yindawo efanelekileyo yokongeza kwindawo yekhitshi. Yenziwe ngebhodi ye-gypsum eyakhiweyo kunye neplatifti emhlophe emhlophe, le ndawo isebenza njengendawo yokuhlamba, indawo yokulungiselela eyongezelelweyo kunye nendawo encinci yokutya / isidlo sakusasa ngokunjalo. Ubume besiqithi sekhitshi esinki lunokuba luncedo olukhulu ekulungiseleleni ukutya nasekucoceni. Ubumnyama obumnyama obunamabala ogcino ocacileyo ohluke kakuhle kwiikhawuntari ezimhlophe kwaye izinto zokubomvu ezibomvu zitshatisa iziqwenga ezibomvu ezifumaneka kwikhitshi lonke.
Ikhitshi elikhulu ngokufanelekileyo elikufutshane negumbi lokutyela elinekhawuntari enkulu yesiqithi ekhitshini. Inamanqanaba amabini. Indawo esezantsi, esemgangathweni yokuphakama kwesi siqithi ine-sink ekhitshini kunye ne-dishwasher eyakhelweyo, ngelixa icandelo elikhulu neliphezulu lekhawuntara yesiqithi lisebenza njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela kunye nendawo eyongezelelweyo yokutya / isidlo sakusasa. Ikhitshi lonke lisebenzisa ngokufanelekileyo i-Himalayan white countertop. Esi siqithi sasekhitshini sikhulu sibonisa uyilo olunamanqanaba amabini kunye nekhawuntara yebar yesidlo sakusasa kwelinye icala, kunye nendawo yokulungiselela ukutya kwelinye icala.
Khumbula ukuba isiqithi sakho sekhitshi kuqala kwaye eyona nto iphambili kwindawo yakho yokusebenza. Kananjalo, i-countertop yesiqithi sekhitshi inokubandakanya indawo yokuntywila okanye i-oveni. Isiseko sesiqithi sasekhitshini sinokuba nenani lezinto ezizodwa nezisebenzayo ezinje ngeedrowa, iikhabhathi kunye nenye indawo yokugcina.
Ukubandakanya iikhabhathi ezakhelweyo kwisiseko sesiqithi sakho sekhitshi yenye yeendlela ezilungileyo zokwenza ngokwezifiso indawo osebenza kuyo. Olunye uncedo lokuba neekhabhathi kwisiseko sesiqithi sakho kukuba unendawo yokugcina ngokulula esandleni. Oku kwenza ukulungiselela ukutya kube lula kwaye kunokukunceda wandise indawo ekhoyo ekhitshini.
Zintathu iintlobo zekhabinethi ezisisiseko. Zezi isitokhwe, semi-isiko, kunye nesiko . Qiniseka ukuba ukhetha uhlobo lwekhabhinethi oluhambelana nencasa yakho kunye noyilo lwakho lwekhitshi ngokubanzi.
Iikhabhathi zesitokhwe zikwabizwa ngokuba ziikhabhathi zohlahlo-lwabiwo mali, kwaye, njengoko igama lisitsho ukuba lolona khetho lwekhabhinethi luhle kakhulu. Unokufumana ikhabhathi yesitokhwe encinci njenge- $ 70 ngeenyawo. Ikhabhathi yesitokhwe inokuthengwa ngaphambi kokuhlangana okanye ukuhlangana kumaziko asekhaya.
Ngelixa iikhabhathi zesitokhwe zinokuba lolona khetho lufanelekileyo, zihlala zinqongophele ngokwesitayile okanye imibala ekhoyo. Iikhabhathi ezinesemi-yesiqhelo zibonelela ngokwahluka okwahlukileyo kwaye-ukuba awufumani khabhathi yesitokhwe ehambelana nombono wakho kuyilo lwakho lwekhitshi lamaphupha, lolona hlobo lwesibini luhlobo lohlahlo-lwabiwo mali lwekhabhinethi esisiseko. Uluhlu lwamaxabiso kwikhabhathi yesiko yesiqhelo iqala kwi- $ 150 ngeenyawo.
Ikhabhinethi esisiseko esisiseko yesiko iya kusebenzisa ukwakhiwa kwesakhelo sobuso apho izakhelo zokhuni zinokubonwa zijikeleze iingcango. Iikhabhathi ezinokwakheka ngokusisigxina zihlala zinokhetho ngokwesiko, zikuvumela ukuba ukhethe ubungakanani kunye nezinto eziphathekayo. Bahlala bakwabonelela ngeendlela malunga nokugqiba kunye nokucheba.
Iikhabhathi ezizenzekelayo ziikhabhathi ezenziwe ngokwenkcukacha zakho ngqo. Ngelixa oku kuthetha ukuba uzakufumana ikhabinethi ehambelana ngokupheleleyo nombono wakho wekhitshi lamaphupha akho, oku kukwathetha ukuba ufumana ikhabhathi enamaxabiso emva koko iikhabhathi ezimbini zokuqala esizikhankanyileyo. Iindleko zolu hlobo lwekhabhinethi ziqala nge- $ 500 ngeenyawo.
Iindidi zeeKhithi zeKhabhinethi yesiqithi seKhitshi
Unokwenza ngokusisiseko iziseko zekhabhinethi kwisiqithi sakho sasekhitshini ngokukhetha ucango lwekhabhathi. Qiniseka ukuba ukhetha isitayile somnyango wekhabhinethi esifana noyilo lwakho kunye nomxholo.
Iingcango zekhabhathi zeplati ezithe tyaba yiminyango apho iphaneli yeziko ithe tyaba. Ezi minyango zintle kakhulu kwaye zicocekile kwaye zihamba kakuhle ngobuncinane, izitayile zangoku.
Iingcango zekhabhinethi ezinyusiweyo yiminyango apho iphaneli yeziko iphakanyiswe khona kwaye ijikelezwe sisakhelo esibi. Ezi ngcango zekhabinethi zihlala zithandwa ngabo bathanda ukujongwa kwendabuko ekhitshini labo.
Iingcango zekhabhathi zeSlab ziingcango eziza njengesiqwenga esiqinileyo, ngaphandle kwezakhelo okanye iipaneli. Ezi minyango incinci zihlala zisetyenziswa kuyilo lwangoku lwekhitshi.
Umnyango wekhabhinethi yaseMullion ngumnyango wekhabhinethi owenziwe ngeglasi. Isakhelo somnyango senziwe ngomthi okanye ngealuminium kwaye iziqwengana zolu daba zenza igridi ngaphezulu kweepaneli zeglasi. Zininzi izinto ezintle zoyilo onokuzifumana ngolu hlobo lomnyango wekhabhathi.
Ikhitshi elikhulu lesintu elinesiqithi esikhulu esinamanqanaba amaninzi ekhitshini. Indawo yokuphakama esemgangathweni isebenza njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela ikhitshi, ngelixa umphezulu webar-counter ukuphakama umphezulu kukutya. Isiqithi sekhitshi sikwadibanisa umboniso kunye nokugcinwa kwewayini kumacala aso kwaye sisebenzisa ityuwa nepepile lenyengane kwindawo esithenga kuyo.
Le khitshi isebenzisa umthunzi othandekayo we-emerald eluhlaza kwiikhabhathi zayo zasekhitshini, endaweni yokukhetha ukugqitywa kweenkuni eziqhelekileyo okanye imibala engathathi hlangothi. Inesiqithi esikhulu sekhitshi esigqibileyo esifanayo, kunye nendawo yokupheka edibeneyo kunye nesilayidi entle yelitye lesepha elimpunga. Isiqithi sasekhitshini esinesitovu sikwenzela ukonwabisa iindwendwe kwaye sinceda umpheki ukuba onwabele ubudlelwane phakathi kokulungiselela isidlo.
Ukugqitywa kweenkuni zetiak ezisetyenzisiweyo kwezi khabhathi zasekhitshini kuyahambelana nokugqitywa kwangaphakathi, njengazo izakhelo zomnyango kunye neebhodi ezisezantsi. Ikhitshi elinemilo engu-L linesiqithi esinde sekhitshi esine-siite granite countertop. Idityaniswe kwisiqithi sekhitshi yindawo engenazintsimbi yesinki kwaye umphezulu omncinci unokuhlala iidiners ezimbini.
Le khitshi yohlobo olwahlukileyo lobukhosi isebenzisa iikhabhathi ezipeyintwe ngombala omnyama, kwaye ineenkcukacha zokubumba ezenziwe ngegolide. Sisisi ekhitshini esimile ngokukodwa sisebenzisa ukugqitywa okufanayo neekhabhathi eziphambili kwaye sisebenzisa i-countertop ye-granite enemibala yokuhombisa ukuhamba nayo. Esi siqithi sisetyenziselwa indawo yokutyela eyongezelelweyo, indawo yokugcina kunye nokulungiselela.
Enye ikhitshi yohlobo lwendabuko esebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe kunye nesilayidi setafile emnyama emnyama. Isiqithi sekhitshi kolu luyilo sisebenzisa ukugqitywa okufanayo neekhabhathi eziphambili, kodwa sisebenzisa islabha esityebileyo segranite engwevu kwindawo yentsika yalo eneenkcukacha zokuphefumla.
Uyilo lwekhitshi yakudala ekwadibanisa nekhawuntari yesiqithi sekhitshi embindini. Ngokungafaniyo neziqithi ezininzi zekhitshi ezilandela ifom egobileyo, engunxantathu okanye ye-l, le inemilo engagunyaziswanga ekhumbuza iimilo zokubumba zakudala. Iikhabhathi ezikhanyayo zepineyini zinika indawo ukubonakala kuthambile kwaye zihambelana kakuhle nezixhobo zokubala ze-Himalayan ezimhlophe.
Ikhitshi elinemixholo emnyama edibanisa ukugqitywa okumnyama -i-wengue emnyama yeekhabhathi kunye negranite emnyama kwi-countertop. Ineziqithi ezibini zekhitshi, esinye sazo sikumgangatho oqhelekileyo wokuphakama, kunye nenye ukuphakama kwebha.
Ukutshatisa umxholo otyheli wegumbi, izixhobo zokubala zasekhitshini zisebenzisa imathiriyeli yetafile etyheli endaweni yezinto eziqhelekileyo zokukhetha ukungathathi hlangothi. Umbala otyheli wegolide kunye nemithambo yendalo yekhitshi legranite yekhitshi lidibanisa kakuhle neendonga ezityheli kunye neekhabhathi ezimhlophe kwaye isebenza njengendawo eyongezelelweyo yokubala yokuhlamba izitya nokulungiselela ukutya.
Esi siqithi sasekhitshini sisebenza ngakumbi njengenxalenye yekhitshi kunendawo eyongezelelweyo yebar / indawo yokutyela. Eyakhelwe ngeekhabhi ze-Oak ezomeleleyo kunye ne-beige granite countertop, ikwanendawo yokuntywila yokuntywila eyakhiweyo kunye ne-dishwasher eyakhelweyo. Ikhawuntari yebha yahlulwe kwisiqithi sekhitshi.
Indawo yoyilo nekhitshi emnyama nomhlophe esebenzisa ubukhulu becala ikhabhathi emhlophe ukwenza indawo ekhanyayo ekhanyayo. Ikhitshi enemilo engu-L ibandakanya isiqithi esikhulu esinexande kunye nekhabhathi emhlophe efanayo kunye necomputer yentsimbi emnyama.
Ukongeza isiqithi sekhitshi yindlela efanelekileyo yokwenza indawo ethe kratya yokubonisa, ukubonisa kunye nokugcina ekhitshini. Nazi izicwangciso ezahlukeneyo zesiqithi zokukunceda ufumane uyilo olugqibeleleyo kuwe nakwiintsapho zakho.
Eli khitshi lilandela uyilo lwekhabhinethi yoyilo lwekhitshi kodwa linokhetho lwanamhlanje lwepeyinti yombala, ubukhulu becala kusetyenziswa ezimhlophe kwiikhawuntari zayo kunye netyuwa kunye nepepile yegranite. Ikhawuntari enkulu yesiqithi sekhitshi isikwere esimile kwaye ibekwe embindini wekhitshi, iyenza indawo efanelekileyo yokulungiselela kunye nendawo yokuhlamba eyakhelweyo. Ngaphantsi kwekhabhathi yesi siqithi umntu unokufumana ukugcinwa kwewayini okwakhelweyo kunye nedrowa kunye neekhabhathi zokugcina izitya, iimbiza neepani. Isiqithi sibonisa uyilo olunamanqanaba amabini kunye nenyathelo ukuya kwindawo yokutya kwasekuseni ukubonelela ngakumbi kwigumbi lokutyela kunye nokuzonwabisa.
Ikhitshi elisebenzisa isiqithi eside esinemibala ekhanyayo kwaye egqibayo ukwenza indawo ekhanyayo ekhanyayo. Umbala ofudumeleyo wemigangatho yawo elaminethiweyo wongeza ukukhanya okufudumeleyo kwikhabhathi emhlophe-epeyintiweyo, ngelixa i-slab eshinyeneyo ye-sienna beige granite idibanisa kakuhle nezinto zokwenza imigangatho. Isiqithi sekhitshi embindini sineeekhabhathi ezimhlophe ezifanayo kunye nezinto ezisemgangathweni, kwaye sisebenza kuphela njengendawo eyongezelelweyo yokulungiselela engenazo iisinki okanye iitopu zokupheka.
Ikhitshi lokubonisa elibonisa ngokufanelekileyo ubuhle bekhitshi kwindawo yokutyela ekufuphi nakwindlu iphela. Iineekhabhathi eziphambili zekhitshi kunye nesiqithi esikhulu sekhitshi esineekhabhathi ezimhlophe kunye needrowa kunye nomgangatho omnyama omhlophe nomhlophe omileyo ophakama usiya kumacala esiqithi sekhitshi.
Uhlobo loyilo lwekhitshi oluphefumlelweyo ngokwesiko, esi siqithi sikhulu sekhitshi sihlaziya iinkcukacha ze-neoclassic ngokususa ezinye iinkcukacha zokukrola. Kugqitywe ngepeyinti emnyama engwevu kwaye ine-countertop engwevu yesepha kunye nesinki yokudibanisa edibeneyo.
Isiqithi sekhitshi esithe tye, phantse ii-cubic kwifom. Isiqithi siqhelana noyilo olumilise u kwaye sihambelana nezinto zokubala zasekhitshini ngomthi wompayini kwikhabhathi kunye neBianca Sardo granite ephezulu. Uya kuqaphela ukuphindaphinda okuphindiweyo kwesikwere esifunyenwe kwiithayile zomgangatho, iithayile ezibuyela umva kunye neminyango yekhabhinethi yaseFrance yeekhabhathi ezingaphezulu.
Uyilo olunye lwelayini ekhitshini kunye nesiqithi siseto sokubonelela ngesidlo sakusasa sentsimbi. Ukugqitywa okumhlophe okupheleleyo kwekhitshi kunye neekhabini zekhitshi kugqamisa ubuhle bendalo betafile yamatye esetyenziswe kolu luyilo. Ikhitshi ubukhulu becala lenziwe sisiqithi esikhulu soxande esine-top eyakhelweyo ngaphakathi. Nditsho izitulo zebar ezisetyenziselwa le khitshi zimhlophe zonke, zakha ikhitshi elijongeka likhazimla elinobushushu obuncinci kumbala welitye elisetyenzisiweyo.
Isiqithi sasekhitshini esiphakathi esidibanisa zombini indawo eyongezelelweyo kunye nendawo yokutyela kunye nokusetyenziswa. Le khawuntari yesiqithi ibandakanya indawo yokuntywila kumgxobhozo wentaba kunye nendawo yokubala eyaneleyo yee-barstools ezi-3. Kukwakho nendawo eyoneleyo yokuhlala eyongezelelweyo.
Olunye uyilo lweklasikhi olusebenzisa indibaniselwano yokugqiba ukufezekisa oku kujongeka. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zikwisiphelo esimhlophe esimdaka kunye nomgangatho wokukhanya wecwecwe lenyengane. Isiqithi sasekhitshini, nangona kunjalo, sigcina ukugqitywa kwegolide ye-walnut kwaye sisebenzisa i-countertop efanayo.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje olujolise kukulula kunye nemigca ecocekileyo. Isebenzisa ukugqibezela umthi wokulamineta ukugqiba zonke iikhabhathi zekhitshi, ukudala isibheno esihle kwaye esingenamthungo. Ikwanesiqithi esikhulu sekhitshi esinezinto zokupheka ezakhelwe-ngaphakathi kunye ne-countertop emhlophe engenamthungo emhlophe. Isiqithi sekhitshi sisebenza njengendawo yokutyela / indawo yokutya kwasekuseni, kwaye iyakwazi ukuhlalisa aba-3 kwangoko.
Eli khitshi liyahamba ngokugqiba umthi wonke, kusetyenziswa iinkuni eziqinileyo ezinamakhonkco kwikhabhathi yayo. Kukho isiqithi sekhitshi esimile okweqanda embindini kunye neekhabhathi ezifanayo kunye nebala elimnyama lokubala. Inesinki eyakhelwe-ngaphakathi kunye nesakhiwo sakusasa sentsimbi kunye neebhedi ezimbini zokutya. I-countertop countertop overhang ivumela abantu ukuba batye ngaphakathi ukuze babe negumbi ngaphantsi kwemilenze yabo kunye noyilo olude oluxande lunika igumbi lengqiniba elaneleyo ngelixa besitya.
Esi siqithi sikhulu sekhitshi esinendawo yokuhlala sikhulu ngokwaneleyo ukulungiselela iindwendwe ngokutya kakuhle. Ikhawuntari enkulu yesiqithi eyongezelelweyo ayisebenzi njengendawo yokulungisa ukutya kunye nendawo yokutyela kuphela kodwa inendawo yokugcina eyongezelelweyo phantsi kweekhawuntari. Inezikhabhathi ezingwevu eziluhlaza, itheyibhile emnyama emnyama kunye neefeksi zebaluster ezixhasa ikhawuntala yebha. Oku kuhambelana nezibane zala maxesha matte ezimnyama kunye nezihlalo zepeyinti emnyama-yepeyinti nayo. isitayile esithandekayo se-oveni esine-tile emva kokutshiza yenza ingxelo ebhaliweyo kwaye isebenze njengendawo ekugxilwe kuyo.
Itafile yelitye yendalo kwesi siqithi sasekhitshini ngokuqinisekileyo yindawo yokumisa ekhitshini. Idibanisa isinki engaphantsi kwentaba kunye neekhabhathi zokugcina kwaye iyakwazi ukulungiselela iidina ezintathu. Iithoni ezifudumeleyo ezimdaka ngombala zeemathiriyeli yetheyiphu ziyazalisa ukugqitywa kweekhabhathi zeMahogany kunye nelitye lokugoba eludongeni ngesitovu sasekhitshini. Uluhlu olunqabileyo lwe-Wolf 36-pro-style yegesi yentsimbi engenasici yeyona nto ilungeleyo kumpheki wendlu.
Esi siqithi sikhulu sekhitshi esinendawo yokuhlala sizibeka sodwa kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi, ngokusebenzisa iikhabhathi ezinamabala oki endaweni yomhlophe. Kwi-countertop yayo, isebenzisa i-slab edibeneyo ye-granite ye-beige ene-nosing eneenkcukacha, kwaye idibanisa ne-kitchen sink. Izitulo zebar zeenkuni ezinezihlalo eziphothiweyo zihambelana nokugqitywa komthi omnyama kwesi siqithi.
Ukusetyenziswa kweepaneli ezinkulu zesipili kuncede ukuphucula indawo, ukuyenza ibonakale ibanzi ngakumbi. Isebenzisa iikhabhathi ezimnyama ezilaminethiweyo ezimnyama kunye nomphambili wokubala omnyama. Ikwanaso nesiqithi sasekhitshini esisebenzisa ukugqiba okufanayo kunye nekhabhathi eziphambili kwaye sidibanisa isinki yentaba phantsi komphezulu waso. Izitulo zebar yentsimbi ezinemiqolo yocingo ziyilo loyilo lwakudala lwekhulu leminyaka.
Le ndawo yanamhlanje yasekhitshini ibeka uluhlu lokuzonwabisa kwisiqithi sekhitshi, isenza ikhitshi elilungele ukonwabisa iindwendwe kunye nokubonisa indlela yokupheka iindwendwe zakho. Isebenzisa i-slab ehle kakhulu yecwecwe elimhlophe le-granite elihamba kakuhle kunye nekhabhathi emnyama elaminethiweyo.
Ikhitshi eliphangaleleyo elinesiqingatha esikhulu sekhitshi eMahogany ekugqityweni kweenkuni kunye nesilayidi esineenxa zonke esine-granite ye-beige. Insimbi engenasici phantsi kwesinki yentaba idityaniswe kwisiqithi sasekhitshini kwaye inendawo eyaneleyo yokuhlala iidiners ezi-2 okanye ezi-3 ngaxeshanye.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje ubukhulu becala kukuhombisa okuphezulu kunye nezixhobo. Isiqithi sasekhitshini esixande esine-laminates ebomvu ebomvu simi embindini wekhitshi. Isiqithi sekhitshi sikwinqanaba elinamanqanaba, enye yokuphakama komgangatho okulinganayo kunye ne-slab ene-cantilevered ye-galaxy granite emnyama isebenza njengendawo yokuphakama kwebar counter.
Le khitshi yesitayile esigcweleyo sinekota encinci yekona yesiqithi ekhitshini efumaneka embindini. ine-matte emhlophe yokugqiba iikhabhathi zesiko ezinee-balusters kwaye zine-counter ekroliweyo ene-red granite counter. Iyakwazi ukuhlalisa ii-stool zeenkuni ezi-2 ezijikelezileyo kunye nezihlalo ezibomvu zokuhlala ezihambelana nezinto zokubala
Ikhitshi elinemibala emhlophe elinemigangatho yeplanga emnyama-epeyintiweyo emnyama ukunceda ukugxininisa iikhabhathi ezimhlophe kunye nesilayi entle yetafile emhlophe yegranite. Isiqithi sekhitshi sikwimo enesetyhula kwaye sinesitulo esimnyama sebhedi.
Esi siqithi sasekhitshini sonyusa isibheno esingenamthungo somhlaba oqinileyo ngokufaka yonke indawo emileyo yesiqithi sasekhitshini. Inekhawuntari ephezulu eyongezelelweyo yokutya, ukutya okanye ukufumana iziselo ezingaqhelekanga ezenziwe ngeglasi enomsindo kwaye ifakwe kwizixhaso ezingenazintsimbi eziqhotyoshelwe kwikhawuntara ephambili yesiqithi.
Ngendawo ekhitshini enesisa, olu luyilo lwekhitshi luyakwazi ukudibanisa isiqithi esikhulu sekhitshi kanye embindini. Indawo yokutyela / ibha yekhitshi yesiqithi ixhaswe ziikholamu ezincinci ezimhlophe, ngelixa ezinye iikhabhathi zasekhitshini ziseTeak, Isebenzisa itheyibhile emhlophe emnandi yequartz ukuthoba umsindo obomvu ofudumeleyo weti.
Inxalenye enkulu yale ndawo yasekhitshini ihlala kwikhawuntara yesiqithi sekhitshi. Isakhelo senziwe ngeekhabhathi ezimnyama zeMillettia Laurentii kwaye ine-slab eshinyeneyo yetyuwa kunye nepepile yegranite counter enekona ejikelezayo. Esi siqithi sasekhitshini ikakhulu sinendawo eyongezelelweyo yokutyela kunye nendawo yokulungiselela ukutya.
Esi sithuba sikhulu sekhitshi silandela uyilo lwekhitshi yodidi lwasekhitshini, oludibanisa iikhabhathi ezimhlophe zekhitshi zokubala zalo eziphambili kunye nekhabhathi yeekhabhathi eziluhlaza okwesibhakabhaka kwikhawuntara yesiqithi sayo. Isiqithi sekhitshi sikhulu kakhulu, sibekwe embindini kwaye sinemilo yesikwere. Inendawo yokuhlambela eyakhelwe-ngaphakathi kwaye ihlala iidiners ezi-2 ukuya kwezi-4 ngaxeshanye. Nokuba isetyenziswa njenge-counter bar, isenendawo eyoneleyo yokulungiselela ukutya kunye nokubonisa.
Watshata phi u kate no william
Uninzi lwabayili bekhitshi banamhlanje bayakuthanda ukudibanisa uyilo lobugcisa kunye nokusetyenziswa, kwaye olu luyilo ngumzekelo omnye walonto. Ngendawo enesithuba esilinganiselweyo, iikhabhathi eziphambili zekhitshi zonke zinikezelwe ngee-oveni ezakhelweyo kunye nefriji kunye nendawo yokugcina i-pantry, ehlala eludongeni olupheleleyo. Ukwenza oku, inesiqithi esikhulu esixineneyo sasekhitshini esinendawo yokupheka kunye nendawo yokuntywila. Izinto zokubala ezisetyenzisiweyo zingwevu oqinileyo ongwevu kwaye zibandakanya ibhloko yebhloga eyenziwe ngomthi ngaphezulu kwendawo eqinileyo yokubaleka ikhitshi.
Ukulandela uyilo lobugcisa bendabuko lwekhitshi, le khitshi isebenzisa uyilo lwekhabhinethi yodidi kunye nokugqitywa kwesiko. Iikhabhathi ze-walnut ezindala zinee-countertops ze-beige. Ikwanayo nekhawuntari enkulu yasekhitshini ekubunjweni kodonga olulula kunye nokudibanisa isinki yodongwe engaphantsi kwentaba kwaye inokuhlala izidlo ezine ukuya ezintlanu ngaxeshanye. Isakhiwo esimile okwe-l sinokufumana izimvo zesiqithi sekhitshi esihamba ngokudala isidingo sokwakheka kwesiko ukulungiselela iindwendwe ngcono, ezinje ngale yoyilo lwesiqithi sijikeleziweyo.
Uyilo lwekhitshi ludibanisa i-aesthetics yanamhlanje neyesiko. Ngelixa iikhabhathi zayo ziphefumlelwe ngokwesiko, ziyiminyango elaminethiweyo ebomvu eMahogany kwaye ine-granite ye-beige enempumlo ethe tyaba. Isiqithi eside sekhitshi sihambelana necala elide lekhawuntala yekhitshi kwaye sisebenzisa izinto ezifanayo njengeekhabhathi eziphambili. Esi siqithi sasekhitshini sisebenza ikakhulu kwindawo yokusebenza eyongezelelweyo, ukugcinwa kunye nokutya njengoko kungekho luhlu lokupheka okanye isinki edityanisiweyo.
Ucocekile kwaye ucocekile, eli khitshi limnyama nelimhlophe linobuhle obungapheliyo. Ineengcango zekhabinethi ezenziwe ngamaplanga ezimhlophe ezimhlophe kwaye zine-slab eshinyeneyo yegranite emnyama. Isiqithi sekhitshi simi embindini, sixande ubukhulu kwaye sikhulu kakhulu. Inesinki yodongwe engaphantsi kwekhawuntari kwaye inezihlalo ezintathu ezimhlophe zebar zokutya kunye nababukeli.
Ngesibheno sobukhosi kunye nenhle, esi sithuba sikhulu sekhitshi ngokuqinisekileyo siya kuba yinto yomona kwabaninzi. Iqukethe iifom zokuvuna kunye nokugqiba ukusuka ngaphakathi kwayo kugqityiwe kwifenitshala kunye nekhabhinethi ngokwabo. Iikhabhathi eziphambili zekhitshi zikukukhanya okutyheli okudala okugqityiweyo kwepeyinti, ngelixa isiqithi sayo esikhulu sasekhitshini sineekhabhathi ezinamachaphaza ane-countertop ye-granite ngendlela entle ekhumbuza iiprofayili zokubumba.
Ikhitshi elincinci alisoloko lingenaso isiqithi sekhitshi. Lo mzekelo uthile ubonakalisa ukuba iziqithi zasekhitshini zinceda njani ukwahlula ukwahlula okanye ukwahlula ikhitshi kulwakhiwo lwesitayile esivulekileyo. Iikhabhathi zakhiwe ngeplanga elula yokutya okuziinkozo enebala elibomvu le-mahogany kunye negranite emnyama emnyama. Iziqithi zasekhitshini zikwabandakanya indawo ephezulu yokuphakama kwebar-counter kwiglasi enomsindo enokuhlala abantu ababini.
Lo ngomnye umzekelo wendawo encinci yekhitshi ekwaziyo ukudibanisa isiqithi sekhitshi kuyilo lwayo. Ukugcina uyilo lumanyene, iphalethi iyazigcina ingaguquguquki kuyo yonke indawo. ukulungelelanisa ithoni enye yomthi kuyo yonke indawo. Isebenzisa i-laminates enetoni emthubi-tyheli kuzo zonke iikhabhathi kunye ne-azure countertop. Isiqithi sekhitshi sikhulu kwaye sixande ngaphandle kwesinki okanye uluhlu lweebhu ezakhelweyo. Inezitulo zebar ezi-3 kwisiphelo esifanayo kwiikhabhathi.
Ukuqhayisa ngefestile enkulu ngombono omkhulu wesixeko, esi siqithi sasekhitshini sikwindawo efanelekileyo. Esi siqithi sasekhitshini sikwi-counter yokuphakama esemgangathweni kwaye sidibanisa isinki yentaba kwaye inde kakhulu ngokude, yanele ukulungiselela iidina ezi-4 okanye ezintlanu. Ikhawuntari yenziwe nge-gypsum eyakhiweyo kwaye ifakwe igranite ekhanyayo ekhanyayo.
Ngesikimu sombala ongwevu-yonke, eli khitshi liqhayisa ngobuhle nobudoda. Inesiqithi esikhulu sekhitshi kunye nekhabhathi elaminishwe ngombala ongwevu kwaye ine-countertop enombala omdaka ngombala omdaka, onobumba obongeziweyo ukunika umahluko kumphezulu. Ukutshatisa umxholo wekhitshi, inezihlalo zetyhubhu zanamhlanje ezinezihlalo ezimnyama zesikhumba kunye nemilenze yentsimbi exutywe ngentsimbi.
Olu luyilo lwasekhitshini lwesiqhelo longeza ukujija kwanamhlanje kwiikhabhathi zoyilo zodibaniso ngokudibanisa iinkuni zetiak ezigqityiweyo iikhabhathi ezinobumba obunombala ongwevu. Isiqithi esikhulu esimile okwe-U sineeplanga ezime nkqo kwipeyinti engwevu kunye nesitrititisi esingqindilili esibomvu-orenji. Isikhewu kwisiqithi esime u-U senzelwe uluhlu olukhulu lokupheka.
Eli khitshi lincinci liyakwazi ukulingana kwisiqithi esincinci sekhitshi ukubonelela ngendawo yokulungiselela eyongezelelweyo. Iineengcango zekhabinethi ezigqityiweyo kumnyama omnyama ogqityiweyo kunye ne-countertop ye-granite enemibala e-cream.
Ngesicwangciso sohlobo oluvulekileyo kunye nophahla oluphezulu, eli khitshi liziva kwaye likhangeleka libanzi. Ukugqitywa kwekhabinethi yekhitshi kunemibala emibini eyahlukeneyo, iikhabhathi eziphambili ezinombala okhanyayo we-beige kunye nesiqithi sasekhitshini ngombala omdaka mnyama. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa islabha esityebileyo seSeinna Beige Marble kwindawo yentsika, kwaye sinendawo eninzi yokugcina kunye neeshelfu zokubonisa.
izimvo zekhabethe yezihlangu
Ikhitshi eliphefumlelweyo le-neoclassic elinesiqithi esikhulu soxande. Isiseko saso sine-ashy emhlophe esigqityiweyo kwaye sifakwe i-countertop ye-green azure. Ikwadibanisa isinki yekhitshi enezinto ezincedisayo zokurabha ioyile. Iikhabhathi zisemthini wecheri kwaye zahluke kakuhle xa kuthelekiswa nekhabhathi emhlophe yesiqithi.
Le khitshi yanamhlanje ine-Asia elula njengokulula kunye nobuhle. Iineekhabhi zekhitshi ezilula kakhulu ekugqityweni kwepine laminate ngaphandle kokubumba kunye nokufakwa kumphezulu weplanite omnyama oqinileyo. Embindini wekhitshi kuphumla isiqithi sekhitshi elinesiphelo esineeekhabhathi eziphambili, kunye nendawo yokupheka eyakhelweyo. Uyilo luvumela umsebenzisi indawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya, kunye nokutya.
Ngendlela yoyilo lwe-glam yaseYurophu, ngokuqinisekileyo eli khitshi liza kushiya umbono omangalisayo. Iineekhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezifakwe ngamaplanga ezimhlophe kunye neetafile ezimnyama zegranite. Ikhitshi enemilo engu-L inesiqithi sekhitshi embindini, isikwere esimile, kwaye inendawo yokuphakama kwebar ephezulu.
Uyilo lwangoku lwekhitshi olunendlela entle yokwenza ishishini enemibhobho eveziweyo kunye neendlela. Isebenzisa iikhabhathi eziluhlaza ezikhanyayo zekhitshi kuyo yonke ikhitshi. Kukho isiqithi esincinci sokuphakama kwebhari ekhitshini embindini onee-laminates ezikhanyayo ezifanayo kunye necomputer yokukhanya eqinileyo yomgangatho ophantse umbala ofanayo nowe-laminates.
Le khitshi yanamhlanje idibanisa ngokukodwa iinkuni ezimnyama zomthi kunye ne-laminate e-orenji eqaqambileyo kwiikhabhathi zayo, zenza iphalethi eyonwabisayo nehlaziyayo kwindawo yekhitshi. Inesiqithi sekhitshi esisikwere esinezinto zokupheka ezakhelweyo kunye nendawo entle yokulungiselela ukutya kunye nokutya. Izinto zokubala zenziwe ngegranite ibekwe kwisiqwenga seplywood.
Umzekelo woyilo lwekhitshi kwindawo encinci. Uyilo olu lubandakanya isiqithi sekhitshi esisebenza ikakhulu njengendawo yolungiselelo eyongezelelweyo kunye nendawo yokutyela. Ukufakelwa kulaminishwe ngombala we-wengue, ngelixa i-countertop imhlophe umphezulu oqinileyo.
Umzekelo omkhulu wesiqithi esincinci sekhitshi esanele ngokwaneleyo ukuba ilingane nekhawuntara yesiqithi. Ngokungafaniyo nekhabhathi epeyintiweyo emhlophe kwiikhawuntari eziphambili, isiqithi sasekhitshini siyazahlula kwikhitshi lonke kunye neekhabhathi zaso zomthi we teak kunye nomphambili wecwecwe elimnyama.
Njengoko eli khitshi limxinwa kwaye lide, kwasetyenziswa isiqithi eside esinamanqanaba amaninzi ekhitshi. Indawo enye ikukuphakama kwetafile yokutya esemgangathweni, isebenza njengendawo eyongezelelweyo yokutyela, ngelixa enye ikumgangatho oqhelekileyo wokuphakama kwekhitshi. Zombini ezi ndawo ziphambili zisebenzisa i-sienna beige granite countertop.
Olunye uyilo lwangoku lwekhitshi oludibanisa i-ash-toni yokugqiba umthi kunye ne-laminates emhlophe emhlophe. Oku kuphumela kwindibaniselwano yombala ofudumeleyo nokhanyayo obonakalayo kakhulu. Ukuphakama kwebar-ukuphakama kwekhawuntari kumi ngokuhambelana nekhitshi eliphambili lekhitshi kwaye lenziwe ngezinto ezikhanyayo ezinobumba obuqinileyo obugqunywe kwiplywood.
Ukudityaniswa kweenkcukacha zokubumba kunye nokugqitywa komthi oqinileyo kongeza kwisibheno esihle kweli khitshi. Isiqithi sasekhitshini esixande sixinene simi phakathi, sinee khabhathi ezimhlophe-zipeyinti kunye ne-countertop ebomvu ebomvu. Inendawo yokuntywila eyakhelwe-ngaphakathi phantsi kwesinki yentaba kunye nesetin-finish faucet ehambelana ngokugqibeleleyo nobuhle bekhitshi liphela.
Ukulandela ubume obungafaniyo nobume bekhitshi, oku kusonga-ngeenxa zonke kwesiqithi esikhulu sekhitshi kulungelelanisa ukumila kodonga apho iikhabhathi zasekhitshini eziphambili zichasene khona, zenza isiqingatha seheksagoni. Iikhabhathi ziyimithi eqinileyo kugqityi-mhlophe, ngelixa imathiriyeli yestafile imhlophe nayo. Isiqithi esikhulu sekhitshi sine-ceramic sink eyakhelwe embindini kunye nendawo yokupheka ephezulu ngasekunene kwekhawuntari.
Kolu luyilo lwekhitshi lwanamhlanje, ikhawuntari yaso enkulu yesiqwengana sekhitshi yeyona nto iphambili kuyo. Impahla yayo yetheyibhuli entle yelitye lesigcawu segolide kwaye idibanisa izibane eziluhlaza okwesibhakabhaka phantsi kweekhawuntari ukwenza umphumo omangalisayo. Esi siqithi sasekhitshini sisebenza ikakhulu njengendawo yokutyela eyongezelelweyo njengoko kukude kakhulu neekhawuntari eziphambili zekhitshi.
Eli khaya lala maxesha liphezulu ngokuqinisekileyo liyayandisa indawo evulekileyo ngokusebenzisa isiqithi sayo sasekhitshini ukubamba umpheki wokungenisa kunye nesinki yentaba ephantsi. Itafile yegranite emnyama igubungela kakuhle umphezulu wokupheka, wenze egudileyo kwaye ingenamthungo, kwaye igqibelele ngedreyini emhlophe kunye neekhabhathi.
Olu luyilo lwangoku lwekhitshi, kodwa ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili, olu luyilo lutyekeleyo lukhazimla kwaye lubonakalise ukugqitywa endaweni yokudityaniswa kwematte kunye neendawo ezibonakalayo. Imigangatho yigwartz emhlophe eneendonga ezimhlophe kunye nekhabhathi yokugqiba iipiyano emhlophe, eyenza ikhitshi lonke libukeke liqaqambe kakhulu. Umphezulu omnyama oqaqambileyo kwisiqithi sekhitshi ulinganisa iindawo eziqaqambileyo, ngelixa i-stainless steel trim phakathi kwekhawuntara kunye nekhabhinethi itshintsha ikhabethe kunye nezinto ezingaphezulu kakuhle.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje oluxhasa ngokufanelekileyo ubuhle bendalo bokugqitywa kwalo. Iikhabhathi ezintle zelnut zigcinwa zingagcinwanga ngothotho olukhanyayo lokugqiba okucacileyo. Le khitshi inesiqithi esikhulu kakhulu sasekhitshi esinamanqanaba amabini okuphakama. Enye kukuphakama kwekhawuntari okuqhelekileyo kunye necomputer emnyama yeetafile kunye neekhabhathi ezifanayo zelnut, ngelixa enye ikwindawo yokuphakama kwebar ene-travertine emnyama enye kodwa ineekona ezijikeleziweyo kunye nomzimba wentsimbi.
Ikhitshi eliphangaleleyo langoku eliya kubomvu ngokungqindilili kwiikhabhathi zasekhitshini. Zonke iikhabhathi zikwisiphelo esibomvu se-laminate esidityaniswe nentsimbi kunye neglasi. Isiqithi sasekhitshini sixande kunye nendawo yokupheka eyakhelwe-ngaphakathi kunye nentloko engaphezulu kweentsimbi ezingenasici. Ngelixa iikhabhathi zekhitshi zingezeli xesha langoku, ukhetho lwezixhobo ezikwi-countertop luqhelekile ngokwesiko, kukhethwa i-countertop engwevu emdaka ngombala endaweni yomphezulu oqinileyo.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje lucekeceke kwaye lubukeka, lufezekile kwizithuba ezincinci kunye nezicwangciso zomgangatho ovulekileyo. Iikhabhathi zasekhitshini zinomphetho omhlophe ocacileyo ngezibambo zentsimbi engenasici. Inesiqithi sekhitshi esixande esinee-countertop ezimhlophe eziqinileyo kwaye siqhagamshelene ngokuthe ngqo kwitafile yokutyela eyenziwe ngomhlaba oqinileyo onamathele kwisiqithi sasekhitshini.
Esi siqithi sasekhitshini sihlaziyiwe kwaye sihle, kunye nekhabhathi zaso ezibengezelayo ezithi zibala ukugqitywa kohambo lodonga lwesitena. Izinto ezikumgangatho ophezulu zihambelana nomphezulu omnyama oqinileyo, odala ukuqaqamba nokungagungqi.
Ikhitshi elihle lanamhlanje elidibanisa ukugqibezela kwe-walnut laminate kunye ne-laminates emhlophe emhlophe kwiikhabhathi zayo. Ikhitshi enemilo engu-L inesiqithi esikhulu soxande ekhitshini apho kuphekelwe khona ukupheka. Endaweni yelitye eliqhelekileyo okanye izinto zomphezulu oqinileyo, esi siqithi sikhetha ukhetho lwangoku-ukugqitywa ngombala we-beige-laminate.
Lo ngomnye umzekelo obalaseleyo woyilo lwangoku lwekhitshi. Isebenzisa iipineyinti zokugqiba iipleyiti zeengcango zekhabinethi kwaye isebenzisa izibambo zeminyango yealuminiyam ukuyigcina intle kwaye inamhlanje. Isiqithi esikhulu sekhitshi esixande simi embindini sinee-laminates ezifanayo njengekhabhathi eziphambili kwaye zine-white solid-surface nge-8 ebanzi yefascia.
Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili yoyilo lwasekhitshini, le sampulu isebenzisa uhlobo olwahlukileyo lwee laminates kwiikhabhathi zaso zasekhitshini nakwisiqithi sasekhitshini. Endaweni yokuqhoboshela iinkuni, isebenzisa iipaneli zokuhombisa kunye nokuyilwa kweenkuni, ukwenza imbonakalo yanamhlanje kodwa ye-rustic. Isiqithi sasekhitshini sisebenzisa i-rose-tinted countertop yentsimbi endaweni yeendawo zamatye, yongeza ukugqibezela okuthe kratya kwiikhabhathi ezijongeka ngathi zi-rustic.
Isiqithi sekhitshi esinomthi oxinzelelekileyo yindlela entle yokuzisa umnqweno welizwe elinomtsalane kuyilo lwakho lwangoku. Eli khitshi lisebenzisa itafile emhlophe emhlophe emhlophe kwisiqithi somthi xa kuthelekiswa nekhawuntara ye-quartz engwevu kwindawo ephambili yokulwa. I-backsplash emhlophe emhlophe enepateni yoyilo ye-chevron iyancoma ikhabhinethi emhlophe kunye nokuvula okuvulekileyo.
Le khitshi yemveli inomdla ophathwayo wasekhitshini wesiqithi. Iziqithi zasekhitshini eziqhelekileyo zineekhabhathi okanye isiseko esenziwe ngokufana kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi, kodwa esi siqithi sasekhitshini yifenitshala eshukumayo. Yitafile esemgangathweni yokuphakama kunye nolwakhiwo oluqinileyo lwe-oki yegolide enemilenze emikhulu eguqulweyo kwaye akukho zikhabhathi okanye iidrowa.
Le khitshi inoyilo olukhethekileyo oluphefumlelweyo olugciniweyo olusebenzisa iinkuni ezixineneyo ekugqityweni kwendalo. Ikhitshi likwanesiqithi esinokushenxiswa esikwimilo esixande, esisebenzisa isiphelo somthi esifanayo neekhabhathi eziphambili zekhitshi. Izinto zokubala zisisitye esimnyama esine-ceramic tile siding.
Uyilo lwekhitshi oluya kujonga inkangeleko yemizi-mveliso yanamhlanje, ukudibanisa ukugqitywa kweenkuni ngemigangatho emnyama emnyama kunye nokugqitywa kwesinyithi. Izidumbu zekhabinethi zayo zipeyintwe ekugqibeleni ezilinganisa ii-GI sheet, kwaye zisebenzisa ubuso obuqinileyo be-Oak. Inesiqithi sekhitshi esixande kunye nokugqitywa okufanayo neekhabhathi eziphambili zekhitshi. Kwitafile yetheyibhuli yayo, isebenzisa izinto ezomeleleyo zomhlaba ezixelisa imbonakalo yemarble, kwaye inesinki eyakhelwe-ngaphakathi eyenziwe kwinto efanayo eqinileyo yomphezulu.
Le khitshi inkulu yohlobo lwendabuko ineziqithi ezibini zekhitshi ezidityanisiweyo kuyilo, ivumela abantu abaninzi ukuba basebenze ekhitshini ngaxeshanye. Esinye seziqithi zasekhitshini sinendawo eyakhelweyo ngaphakathi kwentaba ye-ceramic sink kunye ne-beige granite countertop. Esinye isiqithi sasekhitshini, nangona kunjalo, sinethayile yokubeka endaweni yetafile yelitye, kwaye isebenza njengendawo yokutyela kunye nendawo yokulungiselela.
Le khitshi yesitayile yakudala inobeko ngokungaqhelekanga. Ngelixa uninzi lweziqithi zasekhitshini zifana neekhabhathi zodonga, le izahlula kancinci kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi. Iikhabhathi ezintle ezihonjiswe ngee walnut kwiziqithi zasekhitshini zihambelana kakuhle netafile yesepha engwevu. Isiqithi sekhitshi sikwanendawo yokugcina encinci yeebhotile kunye neglasi yewayini ecaleni, ukongeza kwisinki eyakhelwe-ngaphakathi kunye neshawa.
Isiqithi sebhlokhi sekhitshi kunye nokugqitywa kweoyile kunokuba longezo oluhle kuyilo lwakho lwangaphakathi. Eli khitshi libonelela ngesiqithi esimhlophe sekhabhinethi esingafaniyo nombala ompunga wekhabhathi eziphambili. Esi siqithi sisebenza njengendawo yokutya isidlo sakusasa ezimbini kunye nendawo efanelekileyo yokulungiselela ukutya kunye nesinki engaphantsi kwekhawuntara.
Izimvo ezininzi zesiqithi sekhitshi zivela kwisidingo sokwandisa indawo encinci. Esi siqithi sinceda ngokutya kwindawo yokutya isidlo sakusasa, ukubonelela kwindawo yokugcina izinto kunye nokubonelela ngendawo eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya. Esikhundleni sezinto eziqhelekileyo zokubala ngamatye, i-countertop yebhloko ye-butcher ingaba yinto ekhethekileyo ongayisebenzisa kuwe kwisiqithi sekhitshi, njengalo mzekelo. Umphezulu owenziwe ngeplanga owenziwe ngeoyile wongeza ubuhle kunye nobushushu kwiikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ze-beige ekhitshini, encoma ukugqitywa komthi kwiikhabhathi eziphambili zekhitshi.
Imibono yesiqithi seKhitshi enezinto zokubala zomthi ezikhanyayo zibonelela ngobushushu obufunwa ngabanini bamakhaya. Ikhitshi lesiqhelo lizibeka lodwa ngaphandle kokusetyenziswa kwe-Oak butcher block countertop kwindawo yalo ephambili kunye nesiqithi sayo. Ithoni yeenkuni inceda ukuzisa ukufudumala kwiikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ngelixa igcina isibheno sayo sendabuko se-chic. Iindonga zokufakelwa kwamatye agqityiweyo zigqibezela kakuhle izinto zokubala.
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Iingcamango ezincinci zeCuisine Design - Iingcamango zeKhitshi eziMiselweyo - Iziqithi zeKhitshi zale mihla - Uyilo lwale Khitshi lwanamhlanje
iimfuno zokutshata ecalifornia
wathini uYesu ngothando
imibala yokunxiba emtshatweni
yonke imitshato ebandakanya wonke umntu emanyeneyo
izipho zeminyaka eli-15 yomtshato
ungaba namagama amabini okugqibela
kunye nesayizi yokunxiba yomtshato